राती सपनीमा घाटी थिच्न आउछ, सास फेर्नै गाह्रो बनाउछ? जान्नुहोस किन यस्तो हुन्छ । - Social Video Khabar
राती सपनीमा घाटी थिच्न आउछ, सास फेर्नै गाह्रो बनाउछ? जान्नुहोस किन यस्तो हुन्छ ।
नेपालीमा यस्तो हुनुलाई ऐठन भनिन्छ के हो ऐठन ? Sleeping paralysis नेपालीमा ऐठन भनेको के हो त ?
त्यसको बारेमा यहाँ केही बैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन ।
ऐठन मान्छे मान्छेमा फरक हुन सक्छ । कसैले आवाज कल्पना गर्न सक्छन भने कसैले आफ्नो अगाडि या आफ्नो छातीमा कसैलाई महसुस गर्न सक्छन । ऐठन हुदा हामी भुत प्रत अगाडि पाउछौ र मन मनै भगवानको प्राथना गर्न थाल्छौ किनकि हामीलाई सानैबट सिकाईएको छ कि हामीलाई नोक्सान भुत प्रेतले गर्छ र हामीलाई भावानले बचाउछ । हाम्रो दिमागले पनि त्यही कल्पना गर्छ ।
शरिर सुतेपनि मन अर्धचेत अवस्थामा डुलिरहन्छ जव मान्छे मनोवल कमजोर भई आत्तिन्छ सो–अवस्थामा शरिरमा पुग्नुपर्ने अक्सिजन पुग्दैन् तसर्थ कमजोर हुन्छ अर्धचेत र कमजोरीमा त्यस्ता खराव तत्व प्रवेश गरेर आक्रमण हुन्छ र ऐठन हुन्छ । किनकी मान्छेको शरिरमा सबै तत्व मिलेर रहेको छ । डर, त्रास कमजोरी मान्छेमा जन्मजातै छ ।
स्रोत: साझा पत्रिका
Prevजान्वीको बेली डान्सले पायो हदै पार गरेको गालीको वर्षा ! (भिडियोसहित)
Nextविलासी बन्दै यौन व्यापार, कति कमाउँछन्  ? को–को हुन् ग्राहक ?
धरानको सुनसरी टेक्निकल र धरान आदर्शका विद्यार्थी झोलुङ्गे पुल र झाडीमा (हेरौं भिडियोसहित)
कुबाटोमा लागेपछी यस्तो सम्म हुदो रैछ १८ + ले मात्रै यो भिडियो हेर्नुहोला पुरा हेर्न फोटो मा क्लिक गर्नु होला👇